INGOSI: Inhlanzi isishelwa ngamanzi kumaqembu ezepolitiki ngabaxhasi bawo | isiZulu
INGOSI: Inhlanzi isishelwa ngamanzi kumaqembu ezepolitiki ngabaxhasi bawo
INGOSI: Lusekhona uthando lweqiniso, ungadidwa yizinto zomhlaba
Durban – Kubukeka sekusele kancane kuvele izinto eziningi ebezifihliwe mayelana nokuthi obani ngempela abafaka izimali, nabagcina sebelawula, izinhlangano zakuleli zezepolitiki.
Lokhu kunjengoba ikomidi lasePhalamende belilalele izethulo ezivela ezinhlanganweni ezehlukene zomphakathi kanye nakumaqembu ezepolitiki mayelana nokuxhaswa ngemali kwamaqembu ezepolitiki. Leli komidi lasungulwa ngenhloso yokuba libheke ukuthi amaqembu ezepolitiki kumele yini aveze obala labo abawaxhasa ngezimali.
Leli komidi lizophenya ukuthi ukuxhaswa ngemali kwamaqembu ezepolitiki ameleleke ePhalamende likazwelonke yizinkampani ezizimele kanye nawumphakathi kwenzeka kanjani, kanjalo nokuthi kumele yini kuchitshiyelwe imithetho elawula lo lolu xhaso lwemali.
Lizophinde libheke nokuthi kumele yini kulawulwe (regulate) ukuxhaswa ngezimali kwamaqembu ezepolitiki kanye nezinkampani atshala (invest) kuzona izimali.
Umbiko waleli komidi kulindeleke ukuba wethulwe ePhalamende likazwelonke ngaphambi kokuba kuphele uNovemba.
I-ANC ne-AZAPO yiwona kuphela amaqembu ezepolitiki enze izethulo.
I-ANC inxuse ukuba kulawulwe ukuxhaswa kwamaqembu ezepolitiki ngemali, yathi kumele kunekwe obala isimo sezimali zamaqembu ezepolitiki futhi yanxusa nokuthi kukhule ukusekwa ngezimali kwamaqembu ezepolitiki umphakathi ukuze “kwesekwe intando yeningi”.
Esitatimendeni, uMgcinimafa Jikelele we-ANC, uZweli Mkhize, wathi kunokwethembela ngokweqile kwamaqembu ezepolitiki ekunikelelweni ngezimali yizinkampani ezizimele. Uthi lokhu kugcina sekucindezela izwi labantu ukuze kubekwe phambili izimfuno zalabo abafaka imali.
Sekunesikhathi eside izinhlangano zomphakathi zilokhu zinxusa ukuba kunekelwe umphakathi ukuthi obani ngempela abaxhasa amaqembu ezepolitiki ngezimali. Amanye amaqembu ezepolitiki athi wona angeke aba nankinga nalokhu, inqubo nje uma kuzokwenziwa yiwona wonke amaqembu.
Amaqembu anetwetwe lokuthi azobalekelwa abaxhasi
Kodwa-ke amanye amaqembu asezwakalise ukukhathazeka ngokuthi abanye babaxhasi bawo bangase babe manqikanqika ukuqhubeka nokuwaxhasa ngemali uma ngabe sekuzokwazi izwe lonke ngoxhosa lwabo.
Kuphinde kube nokukhathazeka ngokuthi uma abantu (ngokuzimela) noma izinkampani zinekelwa izwe ngokuxhasa amaqembu ezepolitiki zingase zithole ukuhlukumezeka ngezindlela eziningi, okubalwa kukho nokuncishwa imisebenzi noma amathenda kuhulumeni, ikakhulukazi uma ngabe zixhasa amaqembu aphikisayo.
Uma kungukuthi kugcina kuba yimpumelelo ukuthi amaqembu ezepolitiki aveze obala abaxhasi bawo lokho kungabasiza kakhulu abavoti ekuhlaziyeni kahle kanye nokudweba isithombe esicacile mayelana nokuthi obani kahle hle abalawula busithe lama qembu ezepolitiki.
Isikhathi esiningi ungezwa iqembu libanga umsindo noma likhethe ukuthula sengathi alikho uma kukhulunywa ngama-issues athile athinta umphakathi kanti alisazenzi – selibindwe yiqatha. Kukaningi nje amaqembu ezepolitiki, ikakhulukazi lawa okuthiwa awabantu abamnyama (yize noma kuyigama nje), encamela ukukhetha uhlangothi olushayisanayo nalolu lwabantu, ikakhulukazi labo abathathwa njengesizinda sawo. Uthi umphakathi u-clear ngokuthi ufuna into ethile, awuyifuni ethile, bese kwenziwa amasu okuwuguqula umqondo ukuze uzoshintsha i-stance sawo, uze ushayisane ngamakhanda.
Kunenqwaba yamaqembu ‘abamnyama’ kodwa yibona abahlupheka kakhulu
Empeleni lento yokuxhaswa ngemali kwamaqembu ezepolitiki iyawuphendula lo mbuzo wokuthi kungani kunamaqembu amangaka okuthiwa awabantu abamnyama, nathi alwela abantu abamnyama, kodwa futhi abekho abantu abahlupheka nabahlale bebalisa njengabantu abamnyama.
Akusiyo imfihlo ukuthi udaba lomnotho kuleli kusewudaba olunebala phakathi. Kuyaziwa ukuthi kunezinhlanga okuyizona ezihamba phambili ngokuqhoqhobala umnotho, bese abantu abamnyama beba semsileni, njengenjwayelo. Lokhu kusho ukuthi kusobala ukuthi nosomabhizinisi noma izinkampani ezifaka imali emaqenjini ezepolitiki ngezezinhlanga ezithile. The very same races lawa abantu abamnyama abahlale bebalisa ngokuthi ayabacindezela – either ngokwesimo senhlalo emphakathini, isemisebenzini noma ngokwamabhizinisi.
There is no way ukuthi iqembu lezepolitiki linganquma isandla esiliphakelayo ngenxa nje yezikhalo zabantu ngosomabhizinisi noma izinkampani ezifaka imali.
Ngokujwayelekile osomabhizinisi abavele nje banikele ngemali eqenjini lezepolitiki bengena-interest or i-agenda abafuna ukuyiphusha. Isibonelo, uma ngabe inkampani yezimayini ifaka imali eqenjini lezepolitiki yingoba ifuna ukuthi ama-policies eqembu noma i-position ivune yona. Lokhu kungaba ukuthi izimayini zingafakwa ngaphansi kukahulumi okukanye, kungabi nokuguqo (transformation) kubunikazi bazo.
Isibonelo esifanayo nakulabo abangabanikazi bamabhange noma bomhlaba – inhloso yabo ukuthi uhulumeni ungathathi isinqumo sokubahlukanisa nalokho abakuqhoqhobele.
After that uzozwa iqembu noma abaholi bezepolitiki sebekhuluma sakubhibhidla noma sebeshintsha ushuni uma bekhuluma ngama-issues athinta umphakathi kanti sebeyizicashalala nje ezi-captured. Into efanayo futhi iyenzeka nasezinyunyaneni. Uma ukade wawuzibuza ukuthi kungani minyaka yonke izinyunyana namaqembu ezepolitiki behlale beshumayela ukuthi akuphele ama-labour brokers njalo uma befuna ukukitaza abantu, ikakhulukazi uma kuyiWorkers Day, kodwa kungenzeki – impendulo isobala.
Noma muphi umholi onamandla emphakathini kuzohlale kukhona abafuna ukumlawula
Lento yokuba captured kwamaqembu ezepolitiki ijule kakhulu ngoba ize idlulele ngisho nakubaholi, especially labo abasuke bebonakala ukuthi bane-power noma i-influence. Isibonelo nje, cishe akekho usopolitiki, ikakhulukazi kulabo abasezikhundleni eziphezulu, ongenayo i-trust noma i-foundation. Ezinye zalezi zinhlangano noma izikhwama zivamise ukuthengela izalukazi izijumbana kanye ngonyaka, kubizwe nabezindaba, kodwa kunezimali ezinkulu ezinikelwa kuzona osomabhizinisi abanama-interest. Kungani iminikelo yosomabhizinisi iphuma ingqasha uma kunikelelwa ama-trust nama-foundation abaholi abasemandleni ekubeni baziwa kahle abantu abaxakekile? Kuyaziwa ukuthi kusenezikole ezifundela phansi kwezihlahla, izingane zize ziphonseke emigodini yamathoyilethi agugile.
Okwamaqembu-ke okuthiwa awabantu abamnyama nabaholi bawo kushayisa ngamahloni. Isibonelo, la maqembu kuyaziwa ukuthi aholwa abantu abamnyama, avotelwa abantu abamnyama kanti futhi ukwesekwa kwawo kumandla kakhulu kuzo izindawo zabantu abamnyama. Kanjalo nangesikhathi sokukhankasela ukhetho, bayaziwa abaholi, okuyibo laba abamnyama, abahlale bewa bevuka bekhankasela iqembu, beshiswa yilanga, benethwa nayizimvula.
Kodwa uma usuthi ubheka amaLungu ePhalamende alo leli qembu okuthiwa elabamnyama, ubone sekunezinhlanga osekuyizona esezihamba phambili zimele iqembu ePhalamende. Abantu akade bengabonwa nangokhalo ngesikhathi sokukhankasa, kade beshaywa umoya wama-aircon. Bona futhi laba bantu, who are out of touch with the real issues abantu abamnyama ababhekene nawo, sekuyibona okubekwe ithemba kubona ukuthi babalwele ePhalamende. Kwesinye isikhathi ugcina usuzibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi it is the way of paying back noma these people are ‘planted’njengomgomo wokuxhaswa ngemali yilabo abadla izambane likapondo.
Ngokujwayelekile, if not always, the real struggle will always be diluted once kwaba nokuhlangana phakathi kwabantu abazabalazayo kanye nalabo umzabalazo obhekiswe kubona.
Ayikho into eshayisa amahloni njengokuzwa ukuthi ingqungquthela yokukhetha ubuholi noma yenqubomgomo yeqembu lezepolitiki noma inyunyana izidleko zayo zithwalwe ngusomabhizinisi othile noma inkampani enezinhloso zayo – umcimbi obaluleke kanje wenhlangano, already usudayisiwe. Yini osangabuye uyithembe?
In that case khohlwa ukuthi leyo nyunyana noma iqembu liyoke lithi vu uma kunezikhalo – ezivela kumalungu enyunyana noma abalandeli beqembu – ngokungaphathwa kahle yilo somabhizinisi noma inkampani ‘ebondlayo’. Udayiseka kanjalo-ke umzabalazo.
Until abantu abamnyama babe ne-financial freedom kanjalo ne-economic freedom, bayeke ukuhlale bekhangezwa ezinye izizwe, kuyohlale kufana nomdlalo nje ukuthi abantu abamnyama banezinhlangano – ngoba still zisazomfonyozela ezinye izizwe izigqoko.
Yebo, bakhona osomabhizinisi kanye nezinkampani zabamnyama kodwa bancane kakhulu – nokwenza kufane nento engekho.